Media sy Fanoratan-gazety · Febroary, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Media sy Fanoratan-gazety · Febroary, 2009
Mey 2022 10 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Media sy Fanoratan-gazety tamin'ny Febroary, 2009
Hong Kong: Miaro ny fahalalaham-pitenenana
Hong Kong (Shina) 25 Febroary 2009
Mihoatra ny zato ny mpoina ao Hong Kong no nidina an-dalambe hanambara amin'ny hafa fa mihemotra ny fahalalaham-pitenenana any aminy tamin'ny 22 Febroary 09 lasa teo. Ny Citizens’ Radio no namolavola ny fihetsiketsehana ary notohanan'ny fikambanana mpiaro ny demaokrasia sahala amin'ny Save RTHK Campaign (fanentanana hiarovana ny Radio Televiziona Hong...
Chili: namoaka fantsom-baovao ho an'olo-tsotra ny ONG ho an'ireo iharan'ny herisetra
Fifandraisana iraisam-pirenena 24 Febroary 2009
Niorina ny NGO Víctimas de la Delincuencia [es] (ireo iharan’ny herisetran-jatovo)tao amin’ny renivohitry Chile ao Santiago ny 2006 mba hiarovana, hitarihana sy hanomezana toromarika ireo izay iharan’ny herisetran-jatovo ao an-drenivohitra. Ao anatin’ny tranok’alan’izy ireo, dia milaza fa nisedra ny fotoanan’ny herisetra ny olom-pirenenana (fisotrosotroana, fampitahorana, halatra, fanolanana sy fanararaotana), misy ny horonantsary nampidirina sy mijoro vavolombelona milaza hoe oviana sy tamin’ny fomba ahoana no niharan’izany tamin’izy ireo. Mampihatra ny fiovan’ny lalana ao Chile ny tanjon’ny vaomiera, izay hatrami’izao aloha, araka ny feon’ny victimas de la Delincuencia, dia ohatrin’ny manome tombony/rariny ny mpiherisetra fa tsy ny iharan’ny herisetra.
Trano-kala Iranianina“Balatarin” dia Niverina indray eo amin'”ny seraseram-pifandraisana taorian'ny fangalaran'ny mpiraty azy
Iràna 24 Febroary 2009
Niverina indray eo amin’ny seraseram-pifandraisana ny trano-kala Iranianina “Balatarin” taorian’ny nanaovana hosoka azy ity. Balatarin, izay midika hoe “Ny avo indrindra” amin’ny teny Persiana, dia vondrin-tserasera an-trano-kala iranianina malaza indrindra izay nisy nanao hosoka [en] tamin’ny 3 frebroary 2009. Nanao ny fanambarana ny mpampiasa ny filazam-baovao sy ny fifandraisana ao amin’ny ity trano-kala ity ary ny vondrona mpifidy mba hampisy vokatra avo indrindra ao anaty listra. Ity trano-kala ity dia efa notarafina (nofilitrena) tao amin’ny aterineto tany Iran nanomboka tamin’ny taona 2007.
Martinika: momba ny fahaleovantena sy ny “fifehezana” frantsay
Karaiba 22 Febroary 2009
Raha mbola mitohy moa ny fihetsiketsehan'ny mpiasa any Martinique sy Guadeloupe, dia misy ny mpamaham-bolongana any Martinique mihevitra fa mety te-hahaleo tena itony departemanta ampitan-dranomasina itony. Toy ny nanafintohina an'i le blog de [moi] sy heveriny ho misy fanindriana aloka ihany ny hevitra heverin'ny mpamaky azy fa noho ny mahakely ny nosy no mahatonga azy ireo ho ambany alokaloky ny hafa mandrakariva.
Sinoa: May ny CCTV
Azia Atsinanana 20 Febroary 2009
Ny alin’ny 9 Febroary, tratran’ny afo ny ampahan’ny tilikambon’ny Ivo-toerana Televiziona Sinoa (China Central Television (CCTV)) rehefa nandrehatra afomanga entina hankalazana ny fankalazana ny fetin’ny arendrina ny vaomiera mpikarakara. Nahafatesana mpamono afo iray ny hain-trano araka ny tatitra, nandratrana olona fito, nandravana fitaovam-pampielezam-peo mitentina lavitr’isa Yuan maromaro (milliards). Nahatsikaritra ny...
Azia Atsinanana 15 Febroary 2009
Raha toa ka ny fifanarahana tahaka ny filan-kevitry ny fifidianana no nanjary “adin’alika” eo imason’ireo ikoizan’ny lalana , Inona kosa ary izany no anjara asan’ny filan-kevitra momba ny fifidianana? Eny fa na dia ny tanjaky ny adin’alikan’ireo mpanao lalana LSD aza dia rava, mety hisy fanarenana mendrika ao amin’ny lamina tsy ara-demokratika ve ny ady hevitra eo amin’ny filan-kevitry ny fifidianana?
Sina: Nosakanana an-tserasera ny Lanonan-dohataonan'i Shanzhai
Hong Kong (Shina) 06 Febroary 2009
Ny alin'ny 25 janoary 2009 dia nijanona tany an-tranony mankafy ny sakafo famaranana miandry ny taona vaovao araka ny fanisanandro manaraka ny volana ny ankamaroan'ny Sinoa any amin'ny tanibe. Mahazatra ny ankamaroan'ny mpianakavy rehefa alina tahaka izao ny mijery ny Lanonan-dohataona alefan'ny fahitalavitra CCTV. Tamin'ity taona ity dia misy ny...
Israely: Tatitry ny Rosiana iray, mpanao gazety an-tsary
Israely 03 Febroary 2009
Dmitry Kostyukov (LJ user kostyukov), mpanao gazety Rosiana, dia mamita iraka any Israely amin'izao fotoana izao. Tamin'ny volana Aogositra 2008, nandrakotra ny ady tany Osetia atsimo izy, ary ity misy fampisehoana mandritra ny 6 minitra ny sary nalainy tany: Hatramin'ny namoahany iny sary iny tao amin'ny blaoginy tamin'izy efa tany...